ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ မှအရည်အသွေးမြင့် Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ပုံစံ - STR-****S-A21E Series
အော်တို-စက္ကူ Core ကိရိယာဖြင့် စက္ကူလိပ်ပြုလုပ်သည့်စက်တွင် အိတ်ကို ပြောင်းပါ။&Servo Shuttle စနစ်(၌-လိုင်း extruder ဖြစ်နိုင်ခြေ)
Max အထိ.ထုတ်ကုန်များ၏ 220mm လိပ်အချင်း.
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်တင်တစ်ခုသည် အိတ်၏အရှည်နှင့် တင်းမာမှုကို လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲစေသည်။.
အမြန်&လွန်းပျံယာဉ်အမျိုးအစား Sealing နှင့် Perforation designe ဖြင့် ချောမွေ့သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်။.
တင်းမာမှုမရှိဘဲ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။;ဆူညံသံနည်းပါးပြီး ဖောက်ထွင်းရလွယ်ကူသော ဓားကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။.
ဓားတိုင်း၏ သွားပေါက်ကို အသုံးပြုသူ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။.
ပုံနှိပ်ခြင်း အမှတ်အသား လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်နိုင်သည်။.(ရွေးချယ်ခွင့်)
လည်ပတ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် HMI ထောက်လှမ်းရေးစနစ်.
မတူညီသော core အရွယ်အစားဖြင့် အလိုအလျောက်ပြန်ရစ်သည့်စက်.
ပါးလွှာသော ဖလင်များအတွက် မိုက်ခရိုတင်းအားစနစ်(မိ.8 မိုက်ခရိုမီတာ)နှင့်မျက်ရည်အလွန်လွယ်ကူသည်။.
ဇာတ်ကား အကြီးကြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။.အောက်ခြေ 240micro အထိ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။.
လိုင်း&ကြိမ်;W x Dia. အိတ်အရှည်
ပမာဏ အပူပေးစက် ပါဝါ
400ml/မိ 6.၈x၂.၆၁x၁.7 R-1.6&ကြိမ်;2.7&ကြိမ်;1.7
400ml/မိ 6.၈x၂.၈၆x၁.7 R-1.6&ကြိမ်;2.9&ကြိမ်;1.7
400ml/မိ 6.၈x၃.၀၆x၁.7 R-1.6&ကြိမ်;3.1&ကြိမ်;1.7
400ml/မိ 6.၈x၃.၃၃၁x၁.7 R-1.6&ကြိမ်;3.4&ကြိမ်;1.7
400ml/မိ 7.၈x၃.၅၆x၁.7 R-1.6&ကြိမ်;3.7&ကြိမ်;1.7
400ml/မိ 5.၁x၂.၆၆x၁.7 R-1.6&ကြိမ်;2.7&ကြိမ်;1.7
400ml/မိ 5.၁x၂.၈၆x၁.7 R-1.6&ကြိမ်;3.1&ကြိမ်;1.7
400ml/မိ 5.၁x၃.၀၆x၁.7 R-1.6&ကြိမ်;3.1&ကြိမ်;1.7
400ml/မိ 5.၁x၃.၃၁x၁.7 R-1.6&ကြိမ်;3.4&ကြိမ်;1.7
400ml/မိ 5.၁x၃.၅၆x၁.7 R-1.6&ကြိမ်;3.7&ကြိမ်;1.7
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/core-bag-on-roll-machine-5.html
ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Taiwan, SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD.၏တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ ထုတ်ကုန်လိုင်းများကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာဈေးကွက်တင်ရောင်းချနှင့်နိုင်ငံခြားတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရောင်းချကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးနဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်စံချိန်စံညွှန်းမှာထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဆက်လက်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သင့်သည်ပညာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်ဖြစ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချီတုံချတုံမ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်!
အကောင်းဆုံး Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ